नियमित कफी पिउनुका फाइदाहरु यस्ता छन् - VOICE OF NEPAL
नियमित कफी पिउनुका फाइदाहरु यस्ता छन्
५ पुष २०७६, शनिबार ०९:३२
146 ??? ???????
धेरैजसो मानिसहरु बिहानै उठ्ने बित्तकै कफी पिउने गर्छन् । बिहानै कफी पिउदै गफ गर्नको कज्जा नै बेग्लै हुन्छ । चिसोको मौसममा त झन कफी पिउदा निकै आनन्द आउँछ । ६३ प्रतिशत अमेरिकी त विहान आँखा खुल्ने वित्तिकै कफी पिउने गरेको तथ्याङकमा पनि छ ।
अहिले नेपालीमा पनि कफी पिउने बानि बसिसकेको छ । धेरै नेपालीहरुले कफी पिउन रुचाएका हुन्छन् । दिनमा तीन कप दूध नहालेको कफी पिउनु कलोजो रोगीका लागि फाइदाजनक हुन्छ । यसले कलेजोको रोग लाग्नबाट बचाउछ । कफीले मानिसको रोग प्रतिरोधी क्षमता पनि बढाउछ ।
यसको सेबनले मोटोपना कम गर्न सहयोग गर्छ । नियमित सेबन गर्नाले वजन बढ्न दिदैन । कफीमा रहेको एक रसायनले लिभरमा बोसो लाग्न नदिने हुनछ । यसको नियमित सेबनले हृदय रोग हुदैन । यसको सेबनले मधुमेहको खतरा पनि हुदैन । कफीले रगतमा एड्रेनालाइनको स्तर बढाउछ ।